Wararka Maanta: Sabti, Mar 30, 2013-Wafdi ay Horkacayso Wasiiradda Hormarinta & Adeegga Bulshada oo Maanta booqday Magaalada Baladweyne (SAWIRRO)
Socdaalka wasiirrka hormarinta adeega bulshada ee magaalada Baladweyne waxaa ku wehlinayay wasiirrka wasaarrada Kheraadka dalka C/risaaq Cumar Max’ed iyo xubno ka tirsan wasaarrada caafimaadka kuwasoo u kuur-galayay xaalada dadka uu soo ritay cudurka shuban-biyood ee lagu daweynayo xarumo caafimad oo laga her-galiyay dulleedka magaalada Baladweyne.
Xubnaha wafdiga oo kulan ballaaran kula yeeshay xarunta AMISOM ee dulleedka magaalada Baladweyne mas'uuliyiinta maamulka gobollk iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti, waxaa halkaa warbixin ku siiyay dhaqaatiirta ciidamada AMISOM ee gacanta ku heysa daweynta dadka uu soo ritay cudurka.
Dhakhatiirta ayaa wasiirrada uga warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray cudurka iyo markii ugu horeeysay ee lagu arkay magaalada Baladweyne, iyaga oo sheegay in baaritaan saacadihii ugu danbeeyay la sameeyay lagu ogaaday in cudurku yahay daacuun.
Warbixinta dhakhaatiirta Jabuuti kadib waxaa halkaa ka hadashay wasiirrka wasaarrada hormarinta adeega bulshada Dr Maryan Qaamis Axmed oo sheegtay in ilaa iyo hadda aan lagu tilmaami karin cudurka in uu yahay daacuun.
“Anniga dhakhtar ayaan ahay, astaamo lagu garto ayuu leeyahay cudurka daacuunka, ilaa iyo haddana astaamahaas ma muuqdaan, sidaa daraadeed wali lama oran karo waa daacuun, laakiin waxaan dhihi karnaa waa shuba-biyood caadi ah,’’ayeey tiri wasiirrka hormaarinta adeega bulshada.
Waxaa ay weydiisay dhakhaatiirta ciidamada Jabuuti ee gacanta ku haya bukaanka in ilaa iyo hadda ay arkeen tiro dad ah oo qoys kaliya ka kooban oo mar kaliya uu cudurka soo ritay, iyaga oo sheegay in ilaa iyo hadda aysan arag kiis noocaas oo kale ah, taasoo ay u cuskatay wasiirrka doodeeda ah in cudurkan uusan aheyn daacuun.
“Way dhici kartaa in sheybaarka uu sidan sheegay, laakiin marka laga hadllayo sheybaarka waxaa suurtagal ah in marka 10 ruux tijaabo laga qaado labo ruux oo ka mid ah lagu arko astaamo muujinaya daacuunka, sidaa daraadeed lama dhihi karo dadka cudurka uu soo ritay oo idil waxaa la soo darsay cudurka daacuunka,’’ ayeey tiri wasiirrka hormarinta adeega bulshada oo maanta booqatay Baladweyne
Kulamo kala duwan ayeey kula qaadatay xarumaha lagu daweynayo dadka cudurka uu soo ritay mas’uuliyiinta maamulka gobollka, dhakhaatiirta gobollka gaar ahaan maamulka isbitaalka guud ee Baladweyne iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti oo dhamaantood ka wada hadlleen xaaladaha caafimaad darro ee ka jira magaalada.
Waxay sheegtay in ay siweyn ula socon doonto xaalada dadka bukaanka ah, qeybna ka qaadan doonaan gurmadka caafimaad ee loo fidinayo dadka uu soo ritay cudurka.
Dhakhaatiirta Jabuuti ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu cudurku halleelay dad ka badan 400 oo ruux, halka ay u dhinteen ilaa 12 ruux oo toban ka mid ah ay sheegeen in ay ahaayeen caruur.